CNaPS – FLM Hatomboka ny tetikasa fisotroan-dronono fanampiny
Hiroso amin’ny fisotron-dronono fanampiny ny eo anivon’ny FLM (na ny Fiangonana Loterana Malagasy) ka ny Synoda Atsinanana no natao filamatra amin’izany.
roa andro arak’izany ny 20 sy 21 mey lasa teo dia nidina ifotony tany Vangaindrano ny
CNaPS sy ny FLM foibe nanazava ny dingana arahina ahazoana izany fisotron-dronono
fanampiny « na ny retraite complémentaire » izany. Vokatr’izay dia hitombo ny vola
raisin’ireo mpiasan’ny FLM rehefa tonga ny fahanterana. Ny amin’ity taona 2020 ity dia manana vinan’asa amin’ny hampiroboroboana sy hanentanana ny mpampiasa sy ny mpiasa hiditra amin’io fisotron-dronono fanampiny io, mba hisian’ny fifampitsinjovana bebe kokoa rahatrizay ka tsy miasa intsony ilay mpiasa » hoy Ramatoa Tsaboto Joslina tale jeneraly Lefitra eo anivon’ny CNaPS foibe izay nidina ifotony taty Vangaindrano. Raha 8% ny latsakemboka aloan’ny mpampiasa eo amin’ny sehatry ny fiangonana dia miampy 3,5% izany mba hahafahana misitraka ny fisotron-dronono fanampiny. Miampy 1% kosa ny alaina amin’ny karaman’ny mpiasa izany hoe lasa 2% raha toa ka 1% izany ho an’ny fisotron-dronono fototra efa mahazatra. Isaky ny telovolana mandritra ny vanim-potoana fizarana ny fisotron-dronono no andraisana ireo vola karazany roa ireo ho an’ny zokiolona.